kabarmakyay: April 2012
THE LADY ကို ကျောခိုင်းခြင်း
ဒီဇတ်ကားဟာ စတင် ရိုက်ကူးတယ်လို့ သတင်းထွက်တာနဲ့ ဗမာပြည်သားတိုင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူနိုင်တဲ့ဇတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ဖို့အခွင့်အရေး ရရင် ဗမာပြည်သားတိုင်း မညင်းမပါယ် ကြည့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတာ လုံးဝ အာမခံနိုင်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၅ရက် နေ့ ကTorrent file နဲ့ တင်ထားတာတွေ့လို့ ဒေါင်းယူပီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
စာတန်းထိုးဖို့အကြို ဇတ်ပျိုးလောက်ဘဲကြည့်ရသေးတယ် သမိုင်းအချက်အလက်တွေကို ပြစ်ပစ်ခါခါ ဥပက္ခာပြု ရိုက်ထားတာများဟာ သီးခံနိုင်စရာမရှိအောင်ကိုလွဲချော်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဇတ်လမ်းက စဖွင့်တာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တို့သားအဖ ပုံပြောခန်း မိသားစုအိမ်ကိုပြတာ အင်းယားကန်စပ်ကအိမ်။ မှားနေဘီ။
အမှန်တကယ် အဲသည်ကာလက ဗိုလ်ချုပ်နေခဲ့တာ “တာဝါလိန်းလမ်းက နောက်ပိုင်း ပြတိုက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်။ အဲဒီအိမ်မှာဘဲ ဗိုလ်ချုပ်
ရဲ့ သားငယ် အောင်ဆန်းလင်းရေနှစ်သေတာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံရပီးဘီ အဲဒီအချိန်ထိ တာဝါ လိန်းလမ်းအိမ်မှနေတုံး။
နောက်ပိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု အစိုးရလက်ထက်မှာမှ အခုနေတဲ့အင်းယားလမ်းကအိမ်ကို တသိန်းနဲ့ အစိုးရက၀ယ်ပေးတာ။
ကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ မိသားစုများကိုလည်း လိုက်လံတွေ့ဆုံမေးမြန်းပီး သူတို့အလိုရှိရာ အိမ် ခြံဓါတ်ဆီဆိုင် စသည်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက ဖြည့်စည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခန်း ၀န်ကြီးများကက်ဘိနက်အစီးအဝေးလုပ်တဲ့ အတွင်းဝန်ရုံးအ၀မှာ မဆလ လက်ထက် နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ကြီးထည့်ရိုက်ထားတာကလဲ ဆိုးလှပါတယ်။
အဲဒီခေတ်က ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ ခွက်မြောက်ပီး ချီးယားစ်မလုပ်ပါ။
၁၉၄၇ခု ဇူလိုင်လ ၁၉ရက် ကက်ဘိနက်အစီးအဝေးလုပ်တဲ့အခန်းမှာ ဘယ်လက်နက်ကိုင်အစောင့်မှမရှိပါဘူး ကျဆုံးရာမှာပါသွားတဲ့ သက်တော်စောင့် ရဲဘော်ကိုထွေးဟာ သေနတ်သံကြားလို့ သူအခန်းက ပြေးထွက်လာရာမှာ အပစ်ခံရတာဖြစ်တယ်။ စကတည်းကနေ ရိုက်ကွက်တိုင်းလွဲနေပါတယ်။ စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားတဲ့ လုပ်ကြံသူများ လည်ပင်းစီးတဲ့ပုဝါဟာ မဆလခေတ် ကွန်မန်ဒိုတပ် ကျမှစသုံးတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့အပစ်ခံရချိန်မှာ အားလုံးထိုင်ရက်အစီးအဝေး လုပ်နေဆဲပါ ၀ုန်းခနဲတခါးပွင့်လာပီး ၀င်ပစ် တဲ့အနေအထားမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကစားပွဲထိပ်ခုံမှာ ထိုင်ရက်က အထမှာ စထိတာ တော်မီဂန်း စက်သေနတ်အသေး.၄၅ ကျည် ၁၃ချက်ထိပါတယ်။ တခါးက၀င်ဝင်ခြင်းတလကြမ်းမွေ့ပစ်တာပါ။
ခုပြောတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဟာ နအဖခေတ်မတိုင်ခင်အထိ စာ နယ် ဇင်းများမှာ ရေးသားဖေါ်ပြလာခဲ့တာတွေပါ ။ ထူးပီးကျမ်းကိုးရှာစရာမလိုပါဘူး။
လူမိုက် ဟန်ပါပါ ပစ္စတိုနဲ့ ချိန်ဝင်လာပီး နဖူးကိုချိန် ဗိုလ်ချုပ်ကမျက်စိအမှိတ် …….
တော်ဘီ ဒါရိုက်တာ Luc Besson ရေ မင်ရဲ့ လေဒီကို ကျောခိုင်းလိုက်ပါဘီ။
you should know the director is not our native man .
he was trying to show how our lady and our fellow ppls inside our country .
I must appreciated the director and the actress that they try the best within limited boundary.
Wake up ....don't chase and look down what the ppls doing ...pls appreciate and look from good view ...
ကောင်းတာရွေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်၈၈ အရေးအခင်းကို သမိုင်းအမှားတွေရိုက်မယ်လည်း
အဖြူတွေကို ဦးကျိုးနေတဲ့ ပုဂိုလ်စွဲ ကျွန်စော်နံတွေကိုဘယ်လိုနားလည်အောင် ဖျောင်းဖျရမှန်းကို မသိတာ
April 27, 2012 4:52 AM
to the top commenter
You are the one who should wake yourself up!
I guess you want to worship foreigners (a) support White supremacy and appreciate whatever they do.
Just try to open-up your mind & stand up for your own people. You don't have to agree with whatever shit foreigners do.
I hope you'd be enlightened soon.
That correct; The Lady is justaFiction one; not documentary film;
Director should tell about this;
Many people around the world may think this isadocumentary one.
Most of the scenes are different from reality!
Dear Bo Dusky;
I agree with you: The Lady is justafiction and notadocumentary film;
Many peoples around the world may think it is documentary one!
The Director should tell about this.
Many scenes are different from reality in historic points;
လေးစားအပ်ပါသော မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား
documentary film မဟုတ်ပေမဲ့
True story အပေါ်အခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖွင့်စာတန်းအရ အခြေခံအားဖြင့် သမိုင်းအချက်အလက်ကိုတော့ True ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီသမိုင်းဆိုတာကလဲ ပေါ့သေးသေးသမိုင်းမဟုတ် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းဝင်အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
နဂိုလ်ကမှ သမိုင်းထိမ်ချန်ခံခံရလို့ မျိုးဆက်တခုစာလောက် ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်မသိဖြစ်နေကြတာမမေ့ကြစေလိုပါ။
ကွန်မင့်န့်ပေးတာမဟုတ်ဘဲ မေးလ်ပို့ရေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စာမှာ-
“ဗိုလ်ချုပ် သေနတ်မှန်တဲ့အချိန်မှာ မျက်စိမှိတ်ခံပြီး ဘာမှမပြောဘဲ သေသွားတာမဟုတ်ဘူး လက်ဝါးတားပြီး ပါးစပ်ကလည်း တခုခု ပြောပြီး သေနတ်ထိသွားတယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်က ဆရာမတွေရဲ့ နေ့ကြီးရက်ကြီးနီးတိုင်း ပြောပြဖူးလို့ မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတယ်။ “ လို့ရေထားပါတယ်။ အဲဒါ အသက် ၄၀တန်း အထက် မျိုးဆက်တိုင်းသိတဲ့သမိုင်းပါ။
မြင်းခွါတချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်းစေရမယ်ဆိုတဲ့ ကြိမ်းဝါးသံမှ အားမနာ အဲသည်ခေတ် အတွင်းဝန်ရုံးအ၀မှာ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်တံဆိပ်ကတော့ နားလည်ပေးလောက်တဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။
ဇတ်လမ်းရိုက်တာမို့ ဗိုလ်ချုပ်မသေဘူးလို့ဇတ်ကွက်ဆင်ပါ လက်ခံပါတယ်။ သမိုင်းအချက်အလက်တော့မပစ်ပယ်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုခြင်တာပါ။
Maung Thar Gyaw said...
Mr. Anonymous: ( top commenter)
We all know very well that the Director is notaBurmese; only fool like you will make suchapoint like that. The entire episode is very important historical event for Burma and that should be correct and precise down to the minute details.
You wake up bloody fool, talk sensibly and make sensible comment.
Burma’s history has been heavily distorted by the so-called historians under the BSPP regime; now byaforeigner. Is that Director related to you?
Do you know the Director hiredaBurmese especially for military aspects of the movies he was directing; once this Burmese pointed out the mistakes the Director fired the Burmese immediately. These mistakes and flaws were made deliberately for commercial gain.
Do not be so grateful to this white trash as though he is your step-father.
No thanks and no regards to you Mr. Anonymous - the bloody fool.
Maung Thar Gyaw
Posted by U NU OF BURMA at 4/26/2012 01:35:00 PM 8 comments Links to this post
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမတြားကျွန်းမှာ ဒီနေ့ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ပြင်းအာ ၈ ဒဿမ ၉ အင်အားရှိ ငလျင်ကြီးတခု လှုပ်သွားတဲ့အတွက် မြန်မာ နဲ့ ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတွေ ဆူနာမီ ကျရောက်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သတိပေးထားပီး ယခုတော့ ဒီအန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်သွားပါပြီလို့ သိရပါတယ်။
သို့သော် တချိန်တည်မှာ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတွေ ငလျင်လှုပ်တယ်၊ မလေးမှာဆို အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတွေ တမိနစ်ဝန်းကျင်လောက် ခါသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ငလျင်က အလျားလိုက် မလှုပ်ဘဲ ဒေါင်လိုက် လှုပ်သွားတဲ့အတွက် ကြောင့် ရေလှိုင်း အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်မသွားခဲ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
ဟာဝိုင်ယီကျွန်း အခြေစိုက် ပစိဖိတ် ဆူနာမီ သတိပေးဌာန (Pacific Tsunami Warning Center) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၃၆စင်တီမီတာမှ တစ် မီတာ အမြင့်လှိုင်းတွေ ဖြစ်လါနိင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမတြားကျွန်းစု အာချေးပြည်နယ်၊ မြို့တော် Meulaboh မြို့နယ် ကမ်းခြေ မြင်ကွင်း
စစ်တွေမြို့အတွင်း ဆူနာမီနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိပေးချက်များကို လိုက်လံ ကြေငြာလျက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် စစ်တွေ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလှေများ ပြန်လည် ၀င် ရောက်လျက် ရှိနေပြီး ကမ်းနီး ငါးဖမ်းလှေများမှာ ၀င်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးဟု သိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အက်ဒမမ် ကမ်းခြေသို့ ဆူနာမီလှိုင်းအသေးစာ ရိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ လှိုင်းသည် ၁၀ စင်တီမီတာ လေးလက်မခန့် ရှိခဲ့ကြောင့်း ထိုင်း အမ်ျိုးသား သဘာဝဘေးအန္တရယ်စောင့်ကြည့်ရေးဌာနမှ ပြောကြောင်း AFP သတင်းဌာနတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီကျော်တွင် အင်ဒိုနီးရှာနိုင်ငံ Sumatra ကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်၌ လှုပ်ခတ်ခဲ့သော အင်အား ၈ ဒသမ ၉ ရစ်ချစတာစကေး ပမာဏရှိ ငလျင်တစ်ခု ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပါဝင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၌ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို ခံစားခဲ့ကြရကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by U NU OF BURMA at 4/11/2012 08:44:00 PM0comments Links to this post
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ရောက် အင်အား စုများရဲ့“စနစ်ဆိုးနဲ့ စစ်ဂျိုး ခွာစို့” ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတာသင်္ကြန် မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး သံချပ်များကို ကမ္ဘာမကြေ သရုပ်ပြ အရွှန်းထွင်သည်။ “နှစ်သစ်သင်္ကြန်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ“
(ဧပြီလ ၂၂ ရက်အထိသာ)
Posted by U NU OF BURMA at 4/03/2012 01:24:00 AM0comments Links to this post
ဒဂုံ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲမဲရေတွက်ရာတွင် အားပေးနေသော လူထု
တနိုင်ငံလုံးတွင် NLD ၄၄နေရာ နိုင်နေ
Aljazeera made an interesting profile on recent Burma in which one young artist revealed: “both sides, the Government as well as NLD have not revealed any policies at all”.
Yes, true, the policy or policies have never been strong suites of either the Government or the NLD. What they have been feeding the people is not elixir but bromide that would cure nothing; they are just stuff for ordinary laymen.
Posted by U NU OF BURMA at 4/02/2012 11:53:00 AM0comments Links to this post